09/11/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ဖုန်းကို လေးလံစေမယ့် Cache တွေကို အော်တိုမက်တစ် ရှင်းပေးတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
ဘယ်အချိန်မှာ Cleaner လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ သတ်မှတ်ထားရမှာပေါ့
ဟွားဝေဖုန်းဆိုင် အဖောက်ခံရလို့ ကျပ်သိန်း ၁၈၀ ကျော်ဖိုးဆုံးရှုံး
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under မှုခင်း | No comments
အင်းစိန်မြို့နယ် ဖော့ကန်ရပ်ကွက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဟွားဝေလက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် အပိုပစ္စည်း အရောင်းဆိုင် တစ်ခု စက်တင်ဘာ ၈ ရက်ညက ဖောက်ထွင်းခံလိုက်ရသဖြင့် ကျပ်သိန်း ၁၈၀ ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါ ဖုန်းဆိုင်မှာ ဖော့ကန်ရပ်ကွက် အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်းမရှိ အမှတ် ၁၅၉၆ တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆိုင်ဖြစ်သည်ဟု ရဲဌာနက အတည်ပြုထားသည်။
ဖုန်းဆိုင်ဖောက်ထွင်းခံရမှုကို စက်တင်ဘာ ၉ ရက် နံနက်တွင် ဆိုင်ဖွင့်ရန် လာရောက်သော ဆိုင်တာဝန်ခံ မသူဇာက တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူမက ဆိုင်အတွင်းသို့ သော့ဖွင့်၍ ၀င်ရောက်စဉ် ဆိုင်နောက်ဖက် ပြူတင်း တံခါးများပွင့်နေပြီး ပစ္စည်းများပျံ့ကျဲနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ဆိုင်ရှိပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးခဲ့သည်ဟုလည်း ရဲစခန်းတွင် ထွက်ဆိုထားသည်။
စစ်ဆေးချက်အရ ဆိုင်နောက်ခန်း ဗီရိုအတွင်း ထည့်ထားသည့် ဟွားဝေနောက်ဆုံးပေါ် လက်ကိုင်ဖုန်းများ အပါအ၀င် ဟန်းဆက် ၁၂၀ ကျော်၊ ကျပ်တစ်သောင်းတန် ငွေဖြည့်ကတ် ၆၀ ခန့်နှင့် ကျပ်ငါးထောင်တန် ငွေဖြည့် ကတ် ၆၆ ကတ်တို့ ခိုးယူခံရသည်ဟုဆိုသည်။
ထိုပစ္စည်းများ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ ၁၈၄ သိန်းကျော်ရှိကြောင်း ဆိုင်တာဝန်ခံက ပျောက်ဆုံးစာရင်းနှင့် တကွ ရဲစခန်းတွင် ပေးပို့တိုင်တန်းထားသည်။
ယင်းတိုင်တန်းမှုကို အင်းစိန်ရဲစခန်းက အမှုအမှတ် (ပ)၉၇၄/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး တရားခံဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ရဲများကစုံစမ်းရှာဖွေလျက်ရှိပြီး ဖမ်းဆီးရမိပါက ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၀ ဖြင့် တရားစွဲမည်ဟု တိုင်းရဲဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရင်သားထွားချင်သူများ ဖတ်ဖို့ ဗဟုသုတ
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
အချိုးအစားလှအောင် ဆေးသောက်လို့ရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အကျိုး-အပြစ်တွေကို သိချင်ပါတယ်ရှင်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အဆင်မပြေလို့ပါရှင်။ အမေ မွေးပေးထားတဲ့ ရုပ်အင်္ဂါကို ပြင်ချင်တာဟာ အခက်ဆုံး တွေထဲမှာ ပါတယ်။
ဒါကို ဆရာဝန်က ပြောတာပါ။ ဆရာဝန်က ဆေးပေးမယ်၊ နည်းလမ်းပေးမယ်၊ ခွဲစိတ်ပေးမယ်။ ခွဲစိတ်တာကို တော့ ဆရာဝန်ဘက်က ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လုပ်နိုင်တာပေါ့။ ကျန်တာကို လိုက်နာရမှာက ကာယကံရှင် ဖြစ် တယ်။ ညွှန်းတဲ့ဆေး သောက်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာ၊ ရှောင်စရာ-ဆောင်စရာတွေကို လိုက်နာဘို့ ကတော့ ကောင်းချင်၊ ပျောက်ချင်သူတွေက လုပ်ကြရတယ်။ ဆရာဝန်တွေမှာလဲ လုပ်ပေးနိုင်တာထက် မလုပ်နိုင်တာတွေက ပိုများမလားဘဲ။
ပိန်ချင်၊ ဝချင်၊ လှချင်၊ ရှည်ချင်၊ ဖြူချင်၊ ညိုတိုတို ဖြစ်ချင်၊ သေးတာကိုကြီးချင်၊ ကြီးတာကိုသေးချင် လိုအင် ဆန္ဒတွေ လူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်။ ကျား-မ မရွေးလဲရှိတယ်။ အရွယ် မရွေးလဲ ရှိသေးတာဘဲ။ ဖြစ်ချင်သူကို အပြစ်မြင်စရာ မရှိသင့်ကြပါ။ ဆရာဝန် ညွှန်တာကို ရချင်တာလဲ ကောင်းတာဘဲ။ အကျိုး-အပြစ် သိချင်တာ လဲ ပညာရှိရာကျတယ်။
ကြွက်သားကိုတော့ ဖွံ့ထွားစေဘို့ မခက်လှပါ။ အလေးမသူတွေသာ ကြည့်ပါ။ ကြွက်သား မဟုတ်တဲ့ အရိုး၊ အဆီ နဲ့ တခြား (တစ်ရှူး) တွေကို ဖွံ့ထွား၊ များပြားလာဘို့ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့တော့ မရပါ။ ရင်သားက ကြွက်သား မဟုတ်ဘူး။ အထောက်အကူ ပြုနိုင်တာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်သား၊ တင်ပါးအတွက် နည်းတွေ ရေးထားပါတယ်။ မေးတဲ့သူက အခြေအနေ မပေးလို့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မရတော့ ခက်ပြန်ပေါ့။ ခက်တာကို ရအောင်ယူနိုင်ရင် လူတော်လို့ ဆိုကြတာမို့ တော်ချင်လိုက်စမ်းပါ။ တခုလေးတော့ သတိပေးပါရစေ။ ဖြစ်သင့်တာကိုသာ ရချင်သင့်တယ်။
မရနိုင်တာ၊ မရသေးတာအတွက် စိတ်ပျက်မနေပါနဲ့။ ကံတရား အားကိုးနိုင်သေးတာဘဲ။ ကံကောင်းချင်ရင် စိတ်ကောင်း အရင်မွေးလို့ ဆရာတော်များက ဆုံးမလေ့ရှိတယ်။ ဆေးပဲ သောက်ချင်သူကမေးလို့ ဆေးကိုသာ အဓိကထား ရေးပါရစေ။ ဆေးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ (အေလိုပက်သစ်) ဆေး၊ (ဟိုမီယိုပက်သစ်) ဆေး၊ (အာယုဗေဒ) ဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေး၊ (ဟာဗယ်) ဆေး၊ တရုပ်ဆေး၊ အိန္ဒိယဆေး၊ အစုံပါဘဲ။ ကြော်ညာတွေက အများကြီး။ တခြားဆေးနည်းတွေကို သင်မထားရလို့ မပြောနိုင်ပါ။ ကိုယ့်ဆေးပညာနဲ့ ဆိုင်တာဘဲ ရေးပါမယ်။ Anabolic steroids (အင်နာဘောလစ်-စတီရွိုက်) တွေရှိတယ်။ ၁၉၃ဝ ကျော်ကတည်းက သုံးလာတယ်။ Medical uses ဆေးကုရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တာတွေက - Bone marrow stimulation ရိုးတွင်းခြင်ဆီ စေ့ဆော်ပေးခြင်း၊ - Growth stimulation ကြီးထွားစေအောင် စေ့ဆော် ပေးခြင်း၊ - Stimulation of appetite and preservation and increase of muscle mass စားချင်စိတ်ကဲ စေပြီး၊ ကြွက်သား ထုထည် ကြီးစေခြင်း၊ - Induction of male puberty ယောက်ျားလေး စောစော လူပျိုဖြစ်စေခြင်း၊ - Male contraception (Testosterone enanthate) ယောက်ျားသုံး သားသမီးမရဆေး၊ - Stimulation of lean body mass and prevention of bone loss in elderly men ကိုယ်ခန္ဓာသေး နေသူတွေကို စေ့ဆော်ပေးခြင်း နဲ့ အသက်ကြီးသူတွေမှာ အရိုးပျက်စီးတာ သက်သာစေခြင်း၊ - Hormone replacement for men ယောက်ျား-ဟော်မုန်း အစားထိုးကုသခြင်း၊ - Gender Identity Disorder ယောက်ျား-မိန်းမ ပီသစေခြင်း၊ Ergogenic use and abuse တလွဲ အသုံးပြုနေတာလဲရှိတယ်။ အမေရိ ကားမှာ လူဦးရေရဲ့ ၁% ဟာ ဒီဆေးမျိုးကို တလွဲသုံးနေကြတယ်။ လူလတ်တန်းစားတွေကနေ အားကစား ပြိုင်ပွဲဝင်ဘို့ မဟုတ်ဘဲ Cosmetic purposes ကိုယ်ခန္ဓာလှချင်လို့ လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒီဆေးမျိုးသုံး သူတွေဟာ မီဒီယာမှာ ဖေါ်ပြတာတွေကို ကြည့်-ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ တလွဲထင်မှတ်နေကြတယ်။ အားကစား နယ်ပယ်မှာတော့ ယောက်ျားတွေရော မိန်းမတွေပါ ကိုယ်ကာယ၊ အလေးမ၊ သံလုံးပြစ်၊ ပြေး-ခုန်-ပြစ်၊ စက်ဘီးစီး၊ (ဘေ့စ်-ဘောလ်)၊ နဘမ်းသတ်၊ သိုင်း၊ လက်ဝှေ့၊ ဘောလုံး၊ ခရစ်ကက်၊ အားကစား နည်းတွေမှာ သုံးကြတယ်။ ဒီလို လူမျိုးတွေထဲက ၅၆% ဟာ ဆရာဝန်တွေ ပြောတာကို မယုံကြဘူး။ ဆေးတွေကို လူသာမက တိရစ္ဆာန်တွေကိုပါ သုံးတာရှိတယ်။ ဆိုင်ကကြက်သား ဝယ်မစားရဲအောင် တချို့နေရာတွေမှာ ဖြစ်နေပြီ။ မြန်မာတွေကတော့ အကောင်အတွက်ဆေး လူသုံးလို့ အကောင်နဲ့ တူသူတွေ မျက်စေ့အောက် မှာတင် ရှိတယ်။
သဘာဝ ဟော်မုန်း (၃) မျိုး (Estradiol, Testosterone, and Progesterone) နဲ့ တည်ဆောက် ဟော်မုန်း ၃ မျိုး (Estrogen compound zeranol, Androgen trenbolone acetate, and Progestin melengestrol acetate) တွေကို တိရစ္ဆာန်တွေကို အသားတိုးအောင် ထိုးပေးတယ်။ Bodybuilding drug ကိုယ်ခန္ဓာ သန်မာကြံ့ခိုင်အောင် သုံးကြတဲ့ဆေးတွေကို ဆရာဝန်တွေတောင်မှ အံ့သြရတယ်။ ဆေး နမူနာ (၃) ခုရေးပြပါမယ်။
(၁) Lasix ဆီးဆေးလို့ အလွယ်ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ရောင်နေသူ၊ သွေးတိုးရှိသူ၊ နှလုံး အလုပ် မလုပ်နိုင်သူတွေကို ပေးတဲ့ဆေး။
(၂) Cytomel ဆိုတာ Thyroid drugs လည်ပင်းကြီးဆေး ဖြစ်တယ်။
(၃) Human chorionic gondotropin (HCG) အလွယ်ပြောရင် အချင်းဟော်မုန်း။
အများ နားလည်အောင် ပြောရရင် ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိစစ်တယ်ဆိုတာ ဆီးထဲ-သွေးထဲမှာ ဒီဟာ ပါနေ-မနေ စစ်တာဖြစ်တယ်။ Breast augmentation ရင်သားကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်နည်းတွေလဲ ရှိတယ်။ Breast implant ရင်သားအတုထည့်တာ နဲ့ Fat-graft mammoplasty procedures အဆီကို နေရာပြောင်း ထည့်ပေး တာတွေဟာ ရင်သား မလှတာကို လှစေဘို့၊ ပိုပြီး အရွယ်အစားကြီးစေဘို့ နဲ့ ထိတွေ့မှုမှာ သာစေ ဘို့ အတွက်လုပ်တယ်။ ရင်သားခွဲစိတ်ပြုပြင် နည်းတွေမှာ Saline-filled (စေလိုင်း) သုံး နည်း နဲ့ Silicone-filled prosthetic breast (စီလီကွန်) သုံးနည်း လုပ်နိုင်တယ်။ Post–mastectomy ရင်သား ခွဲစိတ်ထုတ် ထားရသူတွေကို Breast reconstruction ရင်သား အသစ်တပ်ပေးတာ လုပ်နိုင်တယ်။ ရင်သား ဝိုင်းစက်-ဖေါင်းကြွနေတာ ဓါတ်ပုံမှာ အသားပေးထားရင် အဲဒါ သာမှတ်။
အပြင်ပမ်း ကြည့်ပြီး ရုပ်လှ-မလှ စသဖြင့် အကဲဖြတ်လေ့ရှိတယ်။ အမြင်မှာ သာစေဘို့ အခုအခံလဲ လုပ်ကြပါတယ်။ Camouflage ခေါ်တယ်။ ပုံဖျက်ထားတာပေါ့။ အမှန်က သူများအမြင်ကို အာရုံပြောင်းစေနည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရေးမှာ (စပါယ်ရှယ်လစ်) တွေ ပြောတာက ရင်သားကို ပိုကြီးချင်သူအရေအတွက်နဲ့ ကြီးနေတာကို သေးချင်သူ အရေအတွက် မကွာဘူးတဲ့။ ရင်သား ကြီးနေတာကို ဆေးမပါ၊ ဆရာဝန်မပါဘဲ လှည့်စားနည်း တွေ ရှိပါတယ်။
• Classic dark, black or navy blue အနက်ရောင်၊ အရောင်ရင့်၊ (နေဗီ-ဘလူး) ဝတ်ဆင်ပါ။
• Avoid exposing it ကိုယ့်ဟာကို သူများကို မမြင်သာပါစေနဲ့။
• လူကပိန်ပြီး ရင်သားကထွားနေသူဆိုရင် အောက်က Skinny jeans ဂျင်းဘောင်းဘီ ကြပ်တာဝတ်ပါ။
ကြည့်တဲ့သူ မျက်စိကို တနေရာလွှဲစေပါ။ ဒီတော့ ရင်သားသေးနေသူတွေက ပြောင်းပြန်ယူက ရမလားဘဲ။ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားကျဘို့ရာ တကယ်လိုပါတယ်။ မိန်းမတွေအလှကို "ခါးသေး-ရင်ချီ" လို့ သတ်မှတ် သေးရင် ရင်နဲ့ တင်ကို ပြင်ဘို့ လိုမယ်။ ရင်သားဟာ ရင်ခေါင်းပိုင်း အရိုးစုအပေါ်မှာ ရှိတယ်။ တင်ဆိုတာ ဘေးကားတာနဲ့ နောက်ကော့နေတာဟာ အရိုးပုံပန်းအပေါ် မူတည်တယ်။ လူကိုယ်ခန္ဓာဟာ အရိုးပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတယ်။ အရိုးကို အလှအပအတွက် ပြင်ပေးဘို့ရာ မရသလောက် ခက်ပါတယ်။ ခေမာမိ ဖုရားကြီး တရားချွတ်ခန်း ပန်းချီ တွေ့ဘူးသူ များမှာပါ။ အရိုးပဒေသာပေါ်ကနေ ကြွက်သားတွေ၊ အရွတ် တွေ၊ အဆီတွေ နဲ့ အပေါ်ကနေ အရေပြား ဖုံးထားတယ်။ အတွင်းထဲမှာ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေရှိတယ်။ လှချင်သူတွေက အလှဗေဒ နားလည်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ (ဗီးနပ်စ်) ဂရိလက်ရာ ရုပ်ထုဟာ သမိုင်းမှာ အချစ်နဲ့ အလှကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ လက်တွေ ပြတ်နေတာတောင် ခုထိ တန်ဘိုးထားတုံးဘဲ။ သတိပြုဘို့က ခါးမသေးပါ။ ရင်ကလဲ သူလိုကိုယ်လိုပါ။ သက်ရှိလူတွေကို လှတယ်လို့ သတ်မှတ်တာတော့ ရုပ်တုတွေနဲ့ မတူနိုင်ပါ။ ကိုယ်နေဟန်ထား၊ အဝတ်အစား၊ မျက်နှာပေး၊ မူယာ--မာယာ၊ စတာစတာတွေနဲ့ အလှကို အသက်ဝင်စေနိုင်တယ်။ ဖက်ရှင် ဘန်းစကားတခု ဖြစ်တဲ့ Catwalk လျှောက်လမ်းမှာ လမ်းလျှောက်ပြရတဲ့ ဖက်ရှင်မယ်တွေဟာ အသစ်ပေါ် အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင်တွေဝတ်ပြီး၊ အင်မတန် ပိန်ပါးပြီး တအားအရပ်ရှည်ကြရတာကို စံလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ရင်မထွားတာလဲ တန်ဘိုးတရပ် မဟုတ်ပါလား။ ပုဗ္ဗစေတနာ ပျက်စီးမှုကြောင့် အရုပ်ဆိုးရသူ (ပဉ္စပါပီ) ဟာ ဖောဋ္ဌာဗ္ဗာရုံမှာတော့ နာမည်ကြီးတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ အာရုံခံစားမှု အရည်အချင်း အလွန့်အလွန်ကို ကောင်းလှသတဲ့။ အာရုံကြောတွေ ကောင်းဘို့ ရာ ကျန်းမာဘို့ မလိုပါလား။ ဗီတာမင် (ဘီ) တွေက အာရုံကြောအတွက် ကောင်းတယ်။ ဆီးချိုရှိနေသူတွေ ခြေလက် ထုံတာဟာ B6 နဲ့ B12 နည်းလို့ ဖြစ်တယ်။ B1 ဟာ စိုးရိမ်စိတ်ကို သက်သာစေတာက အာရုံ ကြောတွေအပေါ် သက်ရောက်လို့ ဖြစ်တယ်။ E လဲနည်းရင် Neuron degeneration အာရုံကြောရောဂါ ရစေနိုင်တယ်။ ဗီတာမင် (စီ) ကလဲ စိုးရိမ်စိတ်ကို သက်သောစေတဲ့အပြင် ဦးနှောက်-ဓါတုအလုပ် နဲ့ (အဒြီနယ်-ဂလင်း) တွေကို ကူညီတယ်။ ဓါတ်ဆားတွေထဲက (ကယ်လ်စီယမ်) နဲ့ (မဂ္ဂနီဆီယမ်) တွေလဲ အာရုံကြောတွေအတွက် လိုတယ်။ ကြွက်သားတွေအတွက်လဲ ဗီတာမင်တွေက အရေးပါတယ်။ A ကနေ ကြွက်သားတွေ တင်းအားနည်းတာကို ကူညီမယ်။ B နည်းရင် အားယုတ်ပြီး ကြွက်သာတွေနာနေမယ်။ B-1 နည်းရင်၊ B-6 နည်းရင်၊ B-12 နည်းရင် ကြွက်သားတွေ အားယုတ်နေတယ်။
B-12 က ကြွက်သား ပြန်အသစ်ဖြစ်တာ ကူညီမယ်။ E ထဲမှာ Antioxidant and Anti-inflammatory သတ္တိတွေ ရှိလို့ ကြွက်သားပျက်စီးတာပြင်ဘို့ အသုံးကျတယ်။ C ကလဲ ကြွက်သား ထိခိုက်တာအတွက် ကောင်းတယ်။ နည်းရင် တင်းအားနည်းမယ်။ D က ကြွက်သား အကွေး-အဆန့် အတွက်လိုတယ်။ D အလွန်နည်းရင် ကလေးတွေမှာ Rickets အရိုးပျော့ရောဂါ ဖြစ်မယ်။ လူကြီးတွေမှာ Osteomalacia အရိုး မသန်တာ ဖြစ်မယ်။ အရေကြီးဆုံးတခုနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါမယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစား၊ အဝတ်အစား၊ တန်ဆာ ပလာ၊ လူနေဟန်၊ စတာတွေရဲ့ အတွင်းဘက်မှာ မမြင်ရတဲ့ အလှဆိုတာ သိကြတဲ့အတိုင်း စိတ်အလှဖြစ် ပါတယ်။ ဆရာဝန် မတတ်နိုင်ပါ။ ကိုယ်တိုင်တော့ ကောင်းကောင်း မွေးမြူ၊ သင်ယူ-ကျင့်ဆောင်နိုင် ကြပါ တယ်။ မမြင်ရတဲ့ အလှဆိုတာ မကြည့်ဘဲလဲ သိနိုင်ကြတယ်။ အရာတိုင်းမှာ လှကြပါစေ။
iOS7ကို အခုပဲ Update လုပ်နိုင်ပါပြီ
Appleက iOS7ကို September 18 ရက်နေ့မှာ တရားဝင်အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆည်တော့ Developer Version တွေပဲ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 18 ရက်နေ့ မတိုင်ခင်စမ်းသပ်အသုံပြုချင်သူတွေအတွက် နောက်ဆုံး Version တွေရဲ့ Download Link တွေနဲ့ Update လုပ်နည်းကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Update File တွေကို iDevices အနည်းငယ်မှာစမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်တာတော့ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iDevices အားလုံးအတွက်တော့ အဆင်ပြေနိုင်မလားဆိုတာ မသိပါဘူး။ နောက်ဆုံးထွက် Version တွေဖြစ်တဲ့အတွက် 18 ရက်နေ့မှာ တရားဝင်ထွက်ရှိလာမယ့် iOS7နဲ့ အတူတူ ပဲဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Backup လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ iDevice ကို iTunes နဲ့ Backup လုပ်ပါ။အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခဲ့ရင် ပြန်ပြီး Restore လုပ်နိုင်မှာပါ။
iOS7ကို Download လုပ်ပါ။
သက်ဆိုင်ရာ iDevices အလိုက် iOS7ကို Download လုပ်ပါ။
iPhone 4SiPhone5(Model A1428)
iOS7ကို Update လုပ်ဖို့ iTunes နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Version ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
1. Disk Image (.dmg) ဖိုင်ကို ဖြည်ပြီး iPhone Software Update file(.ipsw) ဖိုင်ကိုရှာပါ။ Desktop ဒါမှမဟုတ် ဖိုဒါတစ်ခု မှာ သိမ်းပါ။ Image ဖိုင်ကို ဖြည်ဖို့ 7-Zip ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ .dmg ဖိုင် ထဲမှာရှိတဲ့ .hfs ကိုပါ ဖြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
2. iTunes ကိုဖွင့်ပြီး iPhone,iPad,iPod နဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။
3. သင့် Device ကို iTunes က အလိုလို Select မလုပ်ဘူးဆိုရင် Manual Select လုပ်ပြီး “Summary” tab ကိုနှိပ်ပါ။
4. Windows User တွေ က Shift Key ကိုဖိထားပါ။ OS X User တွေကတော့ Option Key ကိုဖိထားပါ။ Restore Button ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ .ipsw ဖိုင်ကို ရွေးပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ Update လုပ်တာကို စောင့်ပါ။
5. လိုအပ်ရင် Backup ကနေ Restore လုပ်ပြီး iTunes နဲ့ Sync လုပ်ပေးပါ။
အပေါ်က အဆင့်တွေကို ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ iOS7ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ကားဆင်းတွန်းခိုင်းပြီး သိန်း ၁၂၀ ငွေထုပ်တင် မောင်းပြေးသည့် အငှါးယာဉ်မောင်း
တက္ကစီယာဉ်မောင်းက ခရီးသည်ကို ကားဆင်းတွန်းခိုင်းပြီး ခရီးသည်၏ ကျပ်သိန်း ၁၂၀ ပါ ငွေထုပ်ကို မောင်းယူပြေးသည်ဟုဆိုကာ အမှုဖွင့်တိုင်တန်းမှုတစ်ခုအား အင်းစိန်ရဲစခန်းက စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ယခုအမှုကို တိုင်တန်းသူမှာ အသက် ၄၀ နှစ်အရွယ် ကိုအောင်မိုးဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အုတ်သဲကျောက် ရောင်း ၀ယ်ရေး လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ရဲဌာနကအတည်ပြုထားသည်။
၎င်းသည် ထိုနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်က နေအိမ်မှ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံဝင်းရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ငွေလွှဲရန် ငွေကျပ် သိန်း ၁၂၀ ကို အနက်ရောင်ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အတွင်းထည့်လျက် အင်းစိန်ဈေးရှေ့မှ နံပါတ်မမှတ်မိသည့် အဖြူရောင် ပရိုဘောက်အငှားကားကို ငှားစီးခဲ့သည်ဟု တရားလိုက ရဲကိုထွက်ဆိုထားသည်။
ထို့နောက် ဘုရင့်နောင်သစ်တောရုံးရှေ့အရောက်တွင် တက္ကစီယာဉ်မောင်းက ကားပျက်သွားသဖြင့် ဆင်းတွန်းပေး ရန် ပြောသဖြင့် ကားငှားစဉ်ကတည်းက ကားပေါ်၌ပါလာသော ယာဉ်မောင်း၏ အဖော်က ဆင်းတွန်းပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသူဆင်းတွန်းသော်လည်းမရသဖြင့် ၎င်းကလည်းငွေထုပ်ကို ကားပေါ်တွင် ထားခဲ့ကာ ကူတွန်းပေးရန် ဆင်းခဲ့ကြောင်း တရားလိုကရဲကိုဆက်ပြောထားသည်။
ယင်းသို့ တရားလိုက ဆင်းတွန်းပေးမည်ဟု ကားပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ချိန်တွင်ပင် ကနဦးက ကားတွန်းပေးနေသော အငှားယာဉ်မောင်း၏ အဖော်က ကားပေါ်ကို ပြေးတက်ကာ ကားမှာမောင်းထွက်ပြေးသွားပြီး ငွေထုပ်လည်း ပါသွားကြောင်း တရားလိုက ထွက်ဆိုထားသည်။
ထို့ကြောင့် ငွေကျပ်သိန်း ၁၂၀ ကို ခိုးယူထွက်ပြေးသွားသူ နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူပေးပါရန် တရားလို ကိုအောင်မိုးက တိုင်တန်းသဖြင့် အင်းစိန်ရဲစခန်းကလည်း အမှုအမှတ် (ပ)၉၇၅/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ငွေခိုးပြေးသွားသူများကို လိုက်လံရှာဖွေနေကြောင်း သိရသည်။
တရားလို၏အဆိုအရ ယာဉ်မောင်းသည် ဆံပင်တို၊ မျက်နှာဝိုင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ဝ၊ အသားဖြူသူဖြစ်ပြီး၊ ကားဆင်းတွန်း ယောင်ဆောင်သော ယာဉ်မောင်း၏ အဖော်မှာ ဆံပင်တို၊ မျက်နှာသွယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်၊ အသားမဲပြီး အရပ်ခြောက်ပေခွဲခန့် ရှိကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းတွင်တွေ့ရသည်။
ထိုသူများကို ဖမ်းမိလျှင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၉ဖြင့် တရားစွဲဆိုမည်ဟု ရဲဌာနကဆိုထားသည်။
ရထားပေါ်မှာ ၇ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ က အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် Valeria Levitina အမည်ရ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတော့ မိုနာကို နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ပါတယ်။
တကယ် တစ်ဦးတည်းပါ။ ဘယ်ရော၊ ညာရော သူမ တစ်ယောက် တည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်က အရမ်းပိန်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ရှိုး လျှောက်တဲ့ မော်ဒယ် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆယ်ကျော်သက် ဘဝကတည်းက ပိန်ဖို့အတွက် အစာလျော့စာတာမျိုး၊ ပိန်ဆေး စားတာမျိုးတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ တယ်။
ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ရင်း၊ လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ Anorexia လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ရသွားပါတယ်။ အစားစားချင် စိတ်လုံးဝ မရှိပါဘူး။ ဗိုက်ဆာလို့ စားရင်တောင် ယင်းအစာက အဟာရမဖြစ်သလောက်ကို နည်းပါတယ်။ ဒီတော့ ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း လုံးဝကို ပိန်ချုံးသွားပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆရာဝန်များက ကြိုးစားလို့ အဖြေရှာပေးနေပါတယ်။
ပိန်တာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ကိုယ်ခံအားနည်း အတော်နည်းပါတယ်။ ပိန်ချင်လို့ အစားလျော့စားရင်း ထာဝရပိန်သွားရတဲ့ သူမရဲ့  ဓာတ်ပုံ အစုံအလင်ကို အောက်မှာ ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား စံချိန်သစ်တစ်ခု တင်နိုင်ခဲ့သည့် မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
မိုင်လီ၏ အသစ်ထွက်ရှိမည့် Bangerz အယ်လ်ဘမ်မှ သီချင်းတစ်ပုဒ်၏ ဖြတ်ပိုင်းဗီဒီယိုကို အင်တာနက်တွင် လွှင့်တင်ရာ တစ်ရက်အတွင်း ကြည့်ရှုသူ အများဆုံး စံချိန်တင်သွားခဲ့
MTV၏ ဂီတဗီဒီယို ဆုပေးပွဲ ဖျော်ဖြေမှု ဂယက်ကြောင့် ဝေဖန်မှုများရော၊ လူစိတ်ဝင်စားမှုများပါ ရရှိခဲ့ သည့်နောက် မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်သည် ထူးထူးခြားခြား စံချိန် တစ်ရပ်ပါ ထပ်မံ ရရှိလာကြောင်း သိရှိရသည်။ သူမ၏ အသစ်ထွက်ရှိမည့် Bangerz အယ်လ်ဘမ်မှ သီချင်းတစ်ပုဒ်၏ ဖြတ်ပိုင်းဗီဒီယိုကို အင်တာနက်တွင် လွှင့်တင်ရာ တစ်ရက်အတွင်း ကြည့်ရှုသူ အများဆုံး စံချိန်တင်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုထဲတွင် အသက်(၂၀) အရွယ်ရှိ အဆိုတော် မင်းသမီးသည် လုံးဝ ဝတ်လစ်စားလစ် ဖြစ်နေပြီး သံကြိုးတပ်ထားသည့် သတ္တုဘော လုံးကြီး တစ်ခုပေါ်တွင် ရှိနေသည့် ပုံရိပ်များ ပါဝင်သလို တူကြီးတစ်လက်ကို လျှာဖြင့်လျက်ကာ မြှူဆွယ်သည့် အမူအရာမျိုး ပြုလုပ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုဗီဒီယိုသည် YouTube၏ ဗီဒီယို ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်သော Vevoတွင် လွှင့်တင်ခဲ့ရာ (၂၄)နာရီအတွင်း ကြည့်ရှုသူ (၁၂.၃)သန်း ရှိခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ယခင်စံချိန်ဟောင်းဖြစ်သည့် One Direction အဖွဲ့၏ (၂၄)နာရီအတွင်း ကြည့်ရှုသူ (၁၀.၉)သန်း ရှိခဲ့သော Best Song Everကို သက်တောင့်သက်သာပင် ကျော်တက်သွားခဲ့သည်။ အင်တာနက် ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတွင် စံချိန်သစ် တစ်ခုကို ရရှိခဲ့သော်လည်း ထိုဗီဒီယိုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိုင်လီအနေဖြင့် ပြင်းထန်သော ဝေဖန်မှုများနှင့်လည်း ကြုံခဲ့ရသည်။ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုခဲ့သူ တစ်ဦးက "ကလေးတွေတော့ အတုခိုး မှားမှာပဲ။ သူတော့ ဘာထင်နေတယ် မသိဘူး။ ကြည့်ရတာ အပြာဇာတ်ကား ကျနေတာပဲ"ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုထဲတွင် မိုင်လီသည် အဖြူဝမ်းဆက် အတွင်းခံ အဝတ်အထည်များဖြင့် တူကြီးတစ်လက်ကို ထုနှက်နေကြောင်းလည်း တွေ့ရသည်။ မိုင်လီသည် ယခင်က We Can't Stop ဗီဒီယိုဖြင့် (၂၄)နာရီအတွင်း ကြည့်ရှုသူ (၁၀.၇)သန်း စံချိန် တင်ခဲ့ဖူးသော်လည်း One Direction အဖွဲ့က ကျော်တက်ခဲ့ပြီး ယခုနောက်တစ်ဖန် ပြန်လည် အသာရခဲ့ခြင်းဟု သိရှိရသည်။
မြို့ပြမြေပုံများကို ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် App ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြည့်ချင်သော ..
မြို့မြေပုံကို online ချိတ်ပြီး တစ်ခါ download ဆွဲလိုက်တာနဲ့ ..
offline အနေဖြင့် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ App လေးပါ။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် (၁၄)ခုစလုံးရဲ့ မြေပုံတွေ
အကုန်ပါတယ်ဗျာ။ ကြည့်ချင်တဲ့ မြေပုံကို download ဆွဲကာကြည့်နိုင်တယ်။ download ဆွဲချိန်ကလဲ တစ်မိနစ်တောင် မကြာပါဘူး။ ရန်ကုန်မြို့မြေပုံကို download ဆွဲကြည့်တဲ့အခါ နေရာဒေသတွေကို အသေးစိတ်ဖော်
ပြပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတင်မကပါဘူး မြေပုံတစ်ခုချင်းဆီမှာ စားသောက်ဆိုင်၊ shopping center ၊ hotels ၊ ပန်းခြံ၊ အထင်ကရနေရာများ၊ ဆေးရုံ များ အစရှိသည်တို့ကို
လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်အောင် ကဏ္ဍအလိုက် ပါရှိသေးတယ်။ မိမိကြည့်နေသော မြို့နဲ့ အနီးတ၀ိုက်မှာ ရှိတဲ့ နေရာတွေကို ဖော်ပြပေးမယ့် Nearby function ကလဲ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ မကြာခဏ ခရီးသွားနေသူတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ မြေပုံကြည့်ပြီး ဒိုးချင်ရာကို ဒိုးကြတော့ဗျာ။ Android 2.2 နှင့်အထက် ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
download - (11MB)
dropbox - https://www.dropbox.com/s/gkvba6nh38t4li7/Mr.AD%20-%20City%20Maps%202Go%20Pro.apk
zippyshare - http://www48.zippyshare.com/v/75888258/file.html
အမျိုးသမီး တစ်ဦးသာ နေထိုင်သော မြို့ 
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသာ နေထိုင်သော မြို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ တကယ် ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မြို့ တော် ဝန်ခန့်၊ ကိုယ်တိုင် တစ်ယောက်တည်း အုပ်စိုးနေတဲ့ မြို့ ငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
တည်နေရာကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Nebraska ပြည်နယ်ရှိ Monowi အမည်ရ မြို့ ငယ် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ရွာငယ် တစ်ခုအနေနဲ့ပဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ Only one woman town လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ၁၉၃၀ ခုနှစ် ကာလအတွင်းမှာတော့ လူဦးရေ ၁၅၀ ကျော်ရှိပြီး တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် နည်းလာပါတယ်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ လင်မယား နှစ်ဦးသာ နေထိုင်ပါတော့တယ်။ Rudy နဲ့ Elsie Eiler တို့ လင်မယား နှစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် Rudy ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး အသက် ၇၇ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ Elsie Eiler အမည်ရ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးသာ ကျန်ရှိပါတော့တယ်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၀.၂၁ စတုရန်းမိုင်သာ အကျယ် သာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရွာငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းရွာငယ်လေး ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ အစိုးရက စီစဉ်ခဲ့ ပေမယ့် Eiler လက်မခံ ခဲ့ပါဘူး။ အဓိကကတော့ သူ့ခင်ပွန်း တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ စာကြည့်တိုက် ကျန်ရှိနေ လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး ခေတ်အဆက် ဆက် စုဆောင်းလာတဲ့ အဖိုးတန် စာအုပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မြို့ ငယ်လေး Monowi ကိုမထားခဲ့နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်၊ ကိုယ်တိုင်မဲပေးပြီး ကိုယ်တိုင် မြို့  တော်ဝန်ခန့်ပါတယ်။ လမ်း လေး၊ငါးလမ်း ဝန်းကျင်သာ ရှိတဲ့ ယင်း ရွာငယ်လေးကို လျှပ်စစ်မီးထိန်းလင်းနေစေဖို့ အစိုးရထံ ပုံမှန် အခွန်ငွေ ဆောင်ပါတယ်။ အခြားသော အခွန်များလည်း ပေးဆောင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Town တစ်ခုအ နေနဲ့ မဖျက်ပဲ ဆက်လက် ထားရှိစေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကတော့ စားတော်ဆက် တစ်ခု ဖွင့်ထားပြီး မိုင ၈၀ အကွာရှိ မြို့ က လူတွေ လာရောက် စားသောက်ပါတယ်။
လမ်းကြုံ ဝင်လည်သူများ ရှိသလို၊ စိတ်ဝင်စားလို့ လာရောက် ကြည့်ရှု သူများကြောင့် Eiler ရဲ့  စာကြည့် တိုက်နဲ့ မြို့ ဟာ လတိုင်း လူစည်ကား တယ်လို့ သိရပါတယ်။
International News Myan;
အလုပ်မှ ပြန်လာသူကို ရဲကင်းမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေး ရိုက်နှက်ဒဏ်ရာများကြောင့် ဆေးရုံရောက်
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူနေသည့် ဦးတင်ဇော်အားတွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ -ကျော်ကျော်
ပြည် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၀
ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့ နဝဒေး ရပ်ကွက်တွင် အလုပ်မှပြန်လာ သော ပွဲရုံလုပ်သားတစ်ဦးအား လှည့်ကင်းလှည့်လာသော ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးက ခေါ်ယူစစ်ဆေး ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် ဒဏ်ရာအများ အပြားရရှိကာ ဆေးရုံ တက်ရောက် ကုသမှုခံယူနေရသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဦးလှသောင်း ပဲနှမ်းပွဲရုံမှ ပွဲရုံလုပ်သား ဦးတင်ဇော် ၃၉နှစ် သည် စက်တင်ဘာ၆ရက် ည၈ နာရီခွဲတွင် အလုပ်မှ အိမ်သို့ပြန် လာစဉ် ပြည်မြို့ နဝဒေးရပ်ကွက် ပွဲရုံတန်း နယ်မြေရှိ ရွိုင်ရယ်စတား စားသောက်ဆိုင်အနီးအရောက် တွင် လှည့်ကင်းလှည့်လာသော နဝဒေးရဲကင်းမှ ရဲတပ်သားနှစ်ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ရဲတပ်သားနှစ်ဦးက ဦးတင် ဇော်အား ခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီး မှောင် ရိပ်ခိုမှုဖြင့် ရဲကင်းသို့လိုက်ခဲ့ရန် ခေါ်ရာ ဦးတင်ဇော်က မိမိသည် အလုပ်မှပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အပြစ်မရှိသဖြင့် မလိုက်နိုင်ကြောင်း ငြင်းဆန်သဖြင့် လက်သီးနှင့်ထိုး ပြီး လက်ထိတ် ခတ်ကာ နံပါတ် တုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။ ထိုသို့ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းတွင် ဖူးရောင်ဒဏ်ရာ၊ ဦးခေါင်းပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ၊ ဘယ် တင်ပါးချုပ်ရိုး နာကျင်ဒဏ်ရာနှင့် ဘယ်ဘက်ခြေသလုံးပွန်းပဲ့ဒဏ် ရာများ ရရှိခဲ့ သည်။ ရရှိဒဏ်ရာ များမသက်သာသဖြင့် စက်တင် ဘာရရက် နံနက်၁ဝနာရီခန့်တွင် ပြည်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌တက် ရောက်ကုသမှုခံနေရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်အား မျက် မြင်တွေ့ရှိရပြီး ကိုယ်တိုင်အာမခံ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရသူတစ်ဦး က ''ကျွန်မက ကျွန်မညီမလင်မ ယားရန်ဖြစ်တယ်ထင်လို့ သွားကြည့် တာ။ ဟိုရောက်တော့ ကိုတင်ဇော် ကို ရဲနှစ်ဦးက လက်ထိတ်ခတ်ပြီး ရိုက်နေ တာတွေ့ ရတယ်။ ကိုတင် ဇော်ခေါင်းမှာလဲ သွေးတွေနဲ့။ ဒါ ကြောင့် ကျွန်မက မလုပ်ကြပါနဲ့ တော်ကြပါတော့လို့ ပြောတော့မှ ရိုက်တာရပ်ပြီး နဝဒေးရဲကင်းကို ခေါ်သွားပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
ရဲကင်းရောက်မှ ဒဏ်ငွေ ၁၅၀၀၀ ဆောင်ရမည်ဟု ပြော ကာ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်ဟု သိရသည်။ အရိုက်ခံရသည့် ဦးတင်ဇော် က ''ကျွန်တော်တို့က ကောင်း ရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားတာ ပါ။ ဒါကို အလုပ်ကပြန်အလာ မှောင်ရိပ်ခိုမှုဆိုပြီး အတင်း ဖမ်း ပြီးလုပ်တာပါ။ သူတို့က ပုဒ်မမဖွင့် ဘဲ ဒဏ်ငွေ ၁၅၀၀၀ ဆောင်ခိုင်း တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မဆောင် ပါဘူး''ဟုပြောကြောင်း သိရသည်။
အဆိုတော် စိုးပြည့်ပြည့်စံ ရဲ့ ဟော့ဖိုတိုတွေ
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under ဓါတ်ပုံများ | No comments
ရေချိုးစဉ် သီချင်းဆိုခြင်း ကောင်းကျိုး
Aung Kham (International news for myam;)
အေတီတံတားရေကြီးမှု(၅)ရက်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ခရီးသွားများအခက် တွေ့နေရဆဲဖြစ်နေ
လားရှိုး၊ စက်တင်ဘာ ၁၁။
လာရှိုးမြို့မှ တရုတ်ပြည်နယ်စပ်သို့သွားရာ ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရှိသည့် အေတီ(AT)ချောင်းတံတား တလျှောက် စက်တင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ
ယနေ့အချိန်အထိ ယာဉ်ကြောများပိတ်ဆို့၍ သွားလာရန် အခက်တွေ့နေရဆဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
အဆိုပါ ချောင်းရေသည် ယနေ့ချိန်တွင် ရေကျသွားသော်လည်း ခရီးသည်များ အန္တရယ်ကင်းစွာ သွားလာနိုင်သော အခြေအနေသို့ မရောက်သေးသည့်အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေသော ခရီးသည်များ၏
တည်းခိုရန်နှင့် အစားအသောက်များ ရရှိရန် အခက်တွေ့နေရကြောင်း ခရီးသသည်များက ပြေကြသည်။
“ကျနော်တို့ရေအကျကို စောင့်နေတာ(၂)ရက် ရှိနေပြီ။ ရေကပြန်ကျနေပေမယ့် ကားကတစ်စီးပြီးမှတစ်စီး သွားနေရတာဆိုတော့ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ဖို့ စောင့်ရအုံးမှာ။ ဟိုဖက်ဒီဖက်မှာ စောင့်နေရတဲ့ ကားတန်းကြီးက အရှည်လေးမိုင်လောက်ရှိတာ ခင်များတို့အမြင်ဘဲလေ။ ကားလေးတွေ ဖြတ်ကူးတဲ့အခါ လူလေးငါးယောက်လောက်တွန်းပေးမှ သွားလို့ရတာ။ ကားတစ်စီးတွန်းခအနေနဲ့
ငွေငါးထောင်ပေးရတယ်။ ဆိုင်ကယ်ဆိုရင် တစ်စီးကို ထမ်းခငွေသုံးထောင်ပေးပြီး သွားနေကြတာဘဲ”ဟု ကားဒရိုင်ဘာတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ခရီးသည်တစ်ဦးက“ကျွန်မတို့ မူဆယ်ကလာကြတာ ကလေးသုံးယောက်လည်းပါတယ်။ရေကြီးတဲ့ နေ့ကစပြီး ရောက်နေကြတာ ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အိပ်ရ၊ စားရတာ အဆင်မပြေဘူး၊
ရေကြီးတော့ လား ရှိုးဘက် ကူးမရတာနဲ့ အနီးအနား ရွာခံတွေလာရောင်းတဲ့ ကြက်ဥပြုတ် တစ်လုံးကို သုံးရာနဲ့ ရေသန့်ဘူး အသေးတစ်လုံးကို ငါးရာပေးဝယ် နေရတယ်။ ဒီနေ့တော့ ကူးလို့ရမယ်ထင်တာဘဲ”ဟု မူဆယ်မှလာသော ခရီးသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးသည် နယ်စပ်ခရီးသွားများ၏ အဓိကအားထားရာ လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မိုင်းယော်၊သိန်းနီ၊ လောက်ကိုင်၊ ကွတ်ခိုင်၊ တာမိုးညုင်း၊ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်းဒေသ အသီးသီးသို့
သွားလာနေသော ခရီးသည်ယာဉ်နှင့် ကုန်တင်ကားကြီးများသည် ယခုကဲ့သို့ ရုတ်တရက်ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုကြောင့် လမ်းများပိတ်ဆို့၍ စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ တံတားနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရှိသော ကားများကို သွားလာခွင့်ပေးပြီးဖြစ်သော်လည်း (၂)ရက်ကျော် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသော ကားတန်းကြီးမှာ များစွာရှည်လျားနေပြီဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် အလှည့်မရောက်သေးသည့် ခရီးသွားကားများမှာ ဆက်လက်စောင့်နေရဆဲရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
Screen Lock ကို မိမိအသံနဲ့ ဖွင့်နိုင်မယ့် Voice Lock Screen
Screen Lock ကို မိမိအသံနဲ့ ဖွင့်နိုင်မယ့် App လေးဖြစ်ပါတယ်။
English လို ပြောပြီး ဖွင့်ရပါမယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ English စကားလုံးကို ..
Record လုပ်ပြီး Voice Lock အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Voice Lock က မော်ဒယ်မြင့်ဖုန်းတွေမှာ built in အနေဖြင့်ပါတတ်ပါတယ်။
မပါတဲ့ဖုန်းတွေအတွက် ဒီ App လေးနဲ့ လန်းလို့ရသွားတာပေါ့။
Galaxy S3 မှာ ပါတဲ့ Voice Lock ထက်ကို ဒီ App လေးက ပိုမိုက်နေပါတယ်။ English အသံထွက်တော့ ပြီပြင်မှရမယ်။ ကျွန်တော်ဆို လျှာရှည်ပြီး စကားလုံး အများကြီး ပေးမိတာ .. ပြန်ဖွင့်တော့ ငပိသံနဲ့ဆိုတော့ လေးခါလောက်အော်ပြီး ဖွင့်လိုက်ရတယ်:D
လွယ်ကူတဲ့ English အသံထွက်များကိုပဲ သတ်မှတ်တာ
ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ အကြံပေးပါရစေ။ စမ်းကြည့်ပါ။ Google Voice Search ပါသော ဖုန်းတော်တော်များများနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Google Voice ကို အသုံးပြုပေမယ့် offline ပြောနိုင်တာဖြစ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ဖွင့်တာဖြစ်လို့ ဖုန်းလုံခြုံရေးအတွက် ပိုပြီး စိတ်ချရပါတယ်။ Android 2.3 နှင့်အထက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
download - Voice Lock Screen (1MB)
တုံးအတဲ့မိန်းမ နဲ့ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမ....
ထက်မြက်တဲ့မိန်းမက ယောက်ျားရဲ့အားသာချက်ကိုပဲကြည့်ပြီး အမြဲပျော်ရွှင်တယ်။
တုံးအတဲ့မိန်းမက ယောက်ျားကို သိမ်ငယ်အောင်လုပ်တယ်။ ယောက်ျားကိုသိမ်ငယ်စေတာဟာ ကိုယ့်ကိုသိမ်ငယ်စေတယ်ဆိုတာကို သူမေ့နေလို့ဖြစ်တယ်။
ထက်မြက်တဲ့မိန်းမက ယောက်ျားကို တန်ဖိုးထားလေးစားတယ်။ ယောက်ျားကို လေးစားတာဟာ ကိုယ့်ကိုပိုပေါ်လွင်စေကြောင်း သူနားလည်လို့ဖြစ်တယ်။
ထက်မြက်တဲ့မိန်းမက ယောက်ျားနဲ့အတူ လှပတဲ့အနာဂတ်ရောက်ဖို့ ဦးတည်တယ်။
တုံးအတဲ့မိန်းမက ယောက်ျားရဲ့အမှားကို မလွတ်တမ်းဆုပ်ကိုင်ပြီး ယောက်ျားအကြောင်းအကုန်သိသူလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်တယ်။
ထက်မြက်တဲ့မိန်းမက ယောက်ျားရဲ့အမှားကိုခွင့်လွှတ်ပြီး ယောက်ျားဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မကြီးပြင်းတတ်တဲ့ကလေးလို့ဆိုတယ်။
တုံးအတဲ့မိန်းမက ချက်ပြုတ်လျှော်ဖွပ်တာကို သိပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပြုပြင်၊ မဖီးလိမ်းချင်ဘူး။
ထက်မြက်တဲ့မိန်းမက ချက်ပြုတ်လျှော်ဖွပ်တာကို သိသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ဖီးလိမ်းပြုပြင်ဖို့ မမေ့ဘူး။
credit- original uploader
နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ အလှဓာတ်ပုံတွေ
နေပြည်တော် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၀
ဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်း တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ကျပ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင်ရ Ooredoo ကုမ္ပဏီမှ အကြီးတန်းဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် Ross Cormack ကပြော သည်။ ယနေ့ နေပြည်တော် MICC တွင်ကျင်းပသော လန်ဒန်၊ အင်္ဂလန်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်း အချက်အလက်နည်းပညာ ဝန် ကြီးဌာနတို့မှ ပူးတွဲစီစဉ်ကျင်းပ သော Myanmar Connect 2013 တွင် ယင်းသို့ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
''ဆင်းမ်ကတ်တွေကတော့ တစ်ကတ် ကျပ်၁၅ဝဝနဲ့ရောင်းချ ပေးသွားမှာပါ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်း ကိုတော့ တစ်မိနစ် ၂၅ကျပ်နဲ့ဝန် ဆောင်မှုပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးက တင်ထားတဲ့ ဥပဒေထွက်လာရင် စတင်ပြီးဈေး ကွက်အတွင်း ဖြန့်ဖို့ ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိတဲ့သူတွေအားလုံး ဈေးသက် သက်သာသာနဲ့ လူတိုင်းစေ့နီးပါး အသုံးပြုနိုင်အောင် လုပ်ပေးမှာ ပါ''ဟု ယင်းက ပြောသည်။ ယနေ့ကျင်းပသောMyanmar Connect 2013 သည် MICT, MPT, PDT, Yatana-pon Teleport Company, Ooredoo နှင့် Telenor Myanmar တို့ကို ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးစင်မြင့်ထက် တွင် ပေါင်းစည်းပေးသော ပထမ ဆုံးသော နိုင်ငံတကာအခမ်းအနားတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းတွေကို သူတို့ ပြောတဲ့ဈေးထက် ပိုပြီးသက်သာ သောဈေးနှုန်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေး ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်''ဟု Yatanapon Telelport မှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးမှ သတင်းထောက်များ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြား ခဲ့သည်။
မွတ်စလင်သူပုန်များ ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းရှိမြို့အား တိုက်ခိုက်
လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မွတ်စလင်သူပုန် ၁၀၀ ဦးခန့်ပါဝင်သည့် အုပ်စုတစ်စုသည် တိုက် ခိုက်မှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တနင်္လာနေ့က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ပျားပန်းခပ်မျှ စည်ကားခဲ့သည့် မြို့ တစ်မြို့တွင် ခြောက်ကပ်ပြီးလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရကြောင်း အာဏာပိုင်များကဆို စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က ဘီဘီစီသတင်းဌာနမှ ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသူပုန်အုပ်စုမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများကို ဆန့်ကျင်သည့် အုပ်စုဖြစ်သည်။
မော်ရို အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (MNLF) ခေါင်းဆောင် Nur Misuari ၏ နောက်လိုက်များ သည်အရုဏ်တက်အချိန်တွင် လှေဖြင့်ဇမ်ဘိုအန်ဂါ (Zamboanga) မြို့၏ ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ရာ၊ စစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အနည်းဆုံးစစ်သားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကာ ခြောက်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု ဖိလစ်ပိုင်စစ်ဘက်က ဆိုသည်။
ထို့နောက်တွင် တိုက်ပွဲမှာ မြို့ထဲအထိပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး၊ သူပုန်များက အရပ်သား ၂၀ ခန့်ကို ဓားစာခံများ အဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး အစိုးရတပ်များ တိုက်ခိုက်လာမည့်အရေးကို တားဆီးခဲ့ကြသည်။
“ဇမ်ဘိုအန်ဂါမြို့ထဲကို MNLF အဖွဲ့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြို့ တော်ခန်းမမှာ သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေး အထိမ်းအမှတ်အောင်လံကို လွှင့်ထူဖို့ပါပဲ” ဟု မြို့တော်ဝန် Isabelle Climaco-Salazar က ပြောခဲ့သည်။
“ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သူ ခန့်မှန်းခြေ အယောက် ၂၀ လောက် ရှိနေပါတယ်” ဟု သူမ ကဆိုသည်။
ဖိလစ်ပိုင်တွင် နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည့် မွတ်စလင်သူပုန်ထမှုကြောင့် လူပေါင်း ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီး ဖြစ်ကာ၊ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများစွာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး၊ မင်ဒန်နို (Mindanao) ကျွန်းစုဒေသ၏ တချို့နေရာများတွင် ဥပဒေစိုးမိုးမှု တောက်လျှောက်ပျက်ပြားခဲ့ရသည်။
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ အစောပိုင်းကတည်ထောင်ခဲ့သည့် MNLF အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်လာခဲ့သည့် Nur Misuari ၏ အဖွဲ့သည်၊ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်အများစုနေထိုင်ကြသည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံထဲမှ၊ လွတ်လပ် သောအစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတစ်ခု ခွဲထွက်ရန်တောင်းဆိုမှုများ ထပ်မံပြုလုပ်နေသည့်အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
အစိုးရမှာ သူပုန်အုပ်စုများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရာတွင် မအောင်မမြင် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အုပ်စုကို အစိုးရကပထုတ်နေသည်ဟု ယုံကြည်သည့်အတွက် အစိုးရနှင့် ၎င်း၏အုပ်စုခွာပြဲပြီဖြစ်ကြောင်း Misuari ကလွန်ခဲ့သည့်လက ထပ်မံကြေညာခဲ့သည်။
MNLF မှခွဲထွက်လာခဲ့သည့် အဖွဲ့များထဲမှ အချို့အဖွဲ့များမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို လေးစားလိုက်နာကြသော်လည်း၊ Misuari ၏အဖွဲ့အပါအ၀င် တချို့အဖွဲ့များမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကို ဆန့်ကျင်ကြ သည်။
စစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို မခံရစေရန်အတွက် သူပုန်များသည် ထိုမြို့မှဓားစာခံများအား လူသားဒိုင်း သဖွယ်အသုံးချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဘက်က ဆိုခဲ့သည်။
ထိုမြို့ပေါ်ရှိလမ်းများမှာ ခြောက်ကပ်နေပြီး ဆိုင်များမှာလည်း ပိတ်ထားကြသည်။ လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ထားကြသော ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေး အမှုထမ်းများနှင့် ဖိလစ်ပိုင်စစ်သားများသည် လေဆိပ်၊ ဟိုတယ်များ၊ ဘဏ်များနှင့် တခြားအရေးပါသည့် နေရာများတွင် စောင့်ကြပ်နေကြသည်။
ရေးဆွဲသူ အမည်မသိ ပန်းချီကားကို ဗန်ဂိုး၏ လက်ရာအဖြစ် အတည်ပြု
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under သတင်းများ | No comments
ယခင်က ရှုခင်းပုံတစ်ခု ရေးခြယ်ထားသည့် ပန်းချီကားချပ်ဟောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးဆွဲသူကို အမည်မသိဟုသာ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ယခုအခါ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ အမ်စတာဒမ် ပြတိုက်က ဗန်ဂိုး၏ လက်ရာအဖြစ် ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့
ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီပညာရှင်ကြီး ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး ရေးဆွဲခဲ့သည့် ပန်းချီကား တစ်ချပ်ကို ယခုအခါ အတည်ပြု ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ယခင်က ရှုခင်းပုံတစ်ခု ရေးခြယ်ထားသည့် ပန်းချီကားချပ်ဟောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးဆွဲသူကို အမည်မသိဟုသာ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ယခုအခါ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ အမ်စတာဒမ် ပြတိုက်က ဗန်ဂိုး၏ လက်ရာအဖြစ် ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မွန့်မေဂျာမှ နေဝင်ချိန်ဟု အမည်ပေးထားသော ပန်းချီကားသည် သစ်ပင်များ၊ ခြုံပုတ်ငယ်များနှင့် ကောင်းကင်ရှုခင်းတို့ကို ပုံဖော် ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းက ယင်းပန်းချီကားကို ဒတ်ခ်ျပန်းချီကျော်ကြီး၏ လက်ရာအဖြစ် ယူဆမှုအချို့ ရှိခဲ့သော်လည်း ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။
ထိုပန်းချီကားသည် နော်ဝေးရှိ ကိုယ်ပိုင် ပန်းချီကား စုဆောင်းသူ တစ်ဦးလက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ သောင်တင်နေခဲ့သေးသည်။ ပြတိုက်မှ တာဝန်ရှိသူများက ယခုပန်းချီကားသည် စာလုံးများ၊ ရေးဆွဲသည့် ပုံစံ၊ ရုပ်ဝတ္ထု ပေါင်းစပ်မှုများအရ ဗန်ဂိုး၏ လက်ရာအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပန်းချီလက်ရာသည် ရုပ်လုံးပြည့် ရေးဆွဲထားသည့် ဗန်ဂိုး၏ ပန်းချီကားချပ်များ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွင် (၁၉၂၈)ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်လည်း ဖြစ်လာသည်။
ပြတိုက် ဒါရိုက်တာ အေဆဲလ်ရူဂါက ယခုအတည်ပြု တွေ့ရှိချက်သည် မိမိအတွက် တစ်သက်တစ်ခါ ကြုံရသည့် အတွေ့အကြုံမျိုးဟု ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ (၁၉၉၀)ပြည့်လွန် နှစ်များက ထိုပန်းချီကားကို ဗန်ဂိုး၏ လက်ရာအဖြစ် စာရင်းသွင်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း မရှိသောကြောင့် ပယ်ချခံရပြီး ရေးဆွဲသူ အမည်မသိဟုသာ သတ်မှတ် ခံခဲ့ရကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ထိုပန်းချီကားကို စက်တင်ဘာ (၂၄)ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ပြသသွားမည်ဟု ပြတိုက်က ကြေညာခဲ့သည်။
ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားပြီး ပြုလုပ်ခွင့်ပြန်မကျသူ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမားများအတွက် ထိုင်းမှ အရေးပေါ်နေထိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်
နေထိုင်ခွင့် နှင့် အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ။ ဓာတ်ပုံ - မွန်ကြီး
မဲဆောက် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၀
ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ရှိ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သမားများ မှ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြု လုပ်ရန်လျှောက်ထားရာတွင် အ ချို့သာပြုလုပ်ခွင့်ပြန်ကျခဲ့ရာ ပြု လုပ်ခွင့်ပြန် မကျလာသူ များအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ရှိ အလုပ် သမားရှာဖွေရေးရုံးချုပ်မှ အရေး ပေါ်ကြေညာချက် တစ်စောင်ထုတ် ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါကြေညာချက်တွင် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သမားများ ပြုလုပ်ရမည့် အချက်ငါး ချက်ပါဝင် ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစား နေ ထိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်းဖြစ်သည်။
''အခုလို ထောရောပေါ်လာ တာ ကျွန်မတို့အလုပ်သမားတွေ အတွက် သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါကဟိုး အရင်တုန်းက စနစ်လေ။ ကျွန်မ တို့ ဒီအလုပ်သမားလက်မှတ်လုပ် ရပြီဆိုလို့ရှိရင် အဆင့်ဆင့်နဲ့ သွားရတယ်။ ပထမ ဆုံး အဆင့် က အဲဒီထောရောလို့ခေါ်တဲ့ နေ ထိုင်ခွင့်ကို ရိုက်တာပေ့ါနော်။ အဲဒါရပြီဆိုရင် ကျွန်မတို့ကျန်း မာရေးအာမခံ သွားလုပ်ရတယ်။ ကျန်းမာရေးအာမခံ လုပ်ပြီးမှသာ လျှင် ကျွန်မတို့ အလုပ်သမားရှာ ဖွေရေးရုံးကို သွားပြီး အလုပ် လုပ် ပိုင်ခွင့် လျှောက်ရပါတယ်။ ပတ်စ် ပို့ လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ကျွန်မ တို့ အရင်မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ပြောတဲ့ တစ်နှစ်ခံပေါ့လေ။ အခု အဲဒီစနစ်ကို ပြန်သွားပြီဆိုတော့ လဲ ကျွန်မတို့အလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ ဝမ်းသာမိပါ တယ်''ဟု မဝါဝါနိုင်က ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ နေထိုင်ခွင့်နှင့် အ လုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိရန် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမား များအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ် သမားရှာဖွေရေးရုံးချုပ်၏ ကြေ ညာချက်အတိုင်း မိမိ၏အလုပ်ရှင် နှင့်အတူ ယခင်ပတ်စ်ပို့လျှောက် စဉ်က စာရွက်စာတမ်းပုံစံအ တိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမား ရှာဖွေရေးရုံးသို့ စက်တင်ဘာ ၂ဝရက်မကျော်လွန်မီကာလအ တွင်း ထပ်မံ၍ပြန်တင်ရမည်ဖြစ် ပြီး အဆိုပါလျှောက်လွှာများကို ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမားရှာဖွေ ရေးရုံးမှ ပြန်လည်စိစစ်မည် ဖြစ် သည်။
ထို့နောက် အလုပ်သမားရှာ ဖွေရေးရုံးမှ ရရှိသည့် စာရွက်စာ တမ်းကို တစ်ပါတည်းဆောင်သွား ပြီး အလုပ်ရှင်နှင့်အတူ အလုပ်သ မားများကိုယ်တိုင် မဲဆောက်မြို့ နယ်ရုံး၌ ထောရော ၃၈/၁ နေ ထိုင်ခွင့်ကို စက်တင်ဘာ ၁၆ရက် မှ အောက်တို ဘာ ၃ဝရက် အ တွင်းသွားရောက်ပြုလုပ်ရမည် ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ မိမိတင်ထားသည့် ထော ရော ၃၈/၁ နေထိုင်ခွင့် စာရွက် ရရှိလာသည့်အခါ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းကို ဆေးရုံတွင် စက် တင်ဘာ ၁၆ရက်မှ အောက်တို ဘာ ၃ဝရက်အထိ ၄၅ရက်အ တွင်းသွားရောက်ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်လက် မှတ်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက်မကျော် လွန်မီ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(၁) Wed, Sep 11, 2013 at 6:38 AM
သမီးက ကိုယ်ဝန် ၁၃ ပတ်ရှိပါပြီရှင့်။ အခုသမီးနယ်ကနေ ရန်ကုန်ပြန်တော့မလို့ပါ။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန် ၁၃ ပတ်နဲ့ လေယဉ်စီးလို့ရပါပြီလား သိချင်လို့ပါ။ သမီး ဒီအပတ်ထဲ ပြန်ချင်လို့ သမီးကို ကျေးဇူးပြုပြီးဆရာ အားတဲ့အချိန် မေးပြန်ပို့ပေးပါရှင်။ လေယဉ်က တစ်နာရီလောက်ပဲ စီးရမှာပါရှင့်။
(၂) Jan 10, 2011 at 8:20 PM
ကျွန်မက မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး မွေးချင်လို့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ ဘယ်အချိန် လေယာဉ်စီးလို့ စိတ်အချရဆုံးလဲ သိချင်လို့ပါ။ လေယာဉ် ခရီးစဉ်က နှစ်ဆင့်ကို စုစုပေါင်း ၁၅ နာရီလောက် စီးရမှာမို့လို့ပါ တချို့တွေက ၆လ နဲ့ ၇ လကြားပဲ ကောင်းတယ်။ တချို့က နုတုန်းပဲ ကောင်းတယ် အမျိုးမျိုး ပြောကြလို့ပါရှင့်။
ကနေ့ခေတ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုံး ခရီးသွားတာမှာ အဟန့်-အကန့်တွေ နည်းလာပါပြီ။ ဘယ်လောက် အထိ ပြောကြသလဲ ဆိုရင် “လေယာဉ်ပေါ်မှာ Bathrooms ဘယ်နား ရှိမှန်း သိရင်တော်ပြီ” တဲ့။
သုတေသနတွေ လုပ်ထားပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် လေယာဉ်မယ်လေးတွေကို စမ်းတော့ ပဌမ ၃ လ အတွင်း ကိုယ်ဝန် ပျက်တာ နဲနဲပိုများတာက လွဲရင် မထူးတာ တွေ့ရတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း သူတို့ခမြာ နာရီတွေ အများကြီး (၁ လမှာ ၇၄ နာရီ) အလုပ် လုပ်ကြရသူတွေ ဖြစ်နေတယ်။
• ကိုယ်ဝန် ၃၆ ပတ်ကျော်ရင် Airlines အတော်များများက မတင်ခြင်ပါ။ ဒါကလဲ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ကလေးဖွါးရင် သူတို့ အလုပ်ရှုတ်မှာ စိုးလို့သာပါ။
• သက်တောင့် သက်သာ သွားလာနိုင်အောင် ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။ နေရထိုင်ခင်း ကျယ်တာ စသဖြင့်။
• ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ ကြိုတွေးထင်ထားပါ။ အဝတ်ပို၊ ကလေးအနှီး၊ (ဒိုင်ယ်ပါ) ဆောင်သွားပါ။ ခရီးသွား ဖေါ်ထဲမှာ ဆရာဝန်၊ ဆရာမ ပါ-မပါ စပ်စုပါ စသဖြင့်။
• British Ariways ကိုယ်ဝန် ၃၆ ပတ်ကျော်သူတွေ ကို ကန့်သတ်မှု လုပ်ထားတယ်။
• American Airlines မမွေးခင် ၄ ပတ်အတွင်း ခရီးသွားလိုသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ Medical certificate ဆေးစာ ပါရမယ်။ (အမွှာမဟုတ်၊ ပြဿနာ မရှိသူ၊ ရိုးရိုး ကိုယ်ဝန် အတွက်သာ ဆိုလိုတယ်။) မမွေးမီ နဲ့ မွေးပြီး ၇ ရက် အတွင်း ရှိသူများ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အတွင်းမှာ ၅ နာရီထက် နည်းတဲ့ လေယာဉ်ခရီး စီးခွင့်မပြု။ American Airlines' Special Assistance Coordinator ထံက လက်မှတ်ပါရင်တော့ ရတယ်။ ရေပြင်ကို အကြာကြီး ဖြတ်ရမဲ့ ဥပမာ (ဟာဝိုင်ယီ) ခရီးအတွက် Due date မတိုင်ခင် တလအတွင်း ခရီးမသွားဘို့ အကြံပြုတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေယာဉ် မတွက်ခင် ၄၈ နာရီအတွင်း ရထားတဲ့ သင့်တော်ကြောင်း ဆေးလက်မှတ် ပါရင် လာခြင်လာခဲ့ပါ။ မွေးရက်ထက် ၁ဝ ရက်စောပြီး နဲ့ မွေးပြီး ၇ ရက်အတွင်းရှိသူတွေ American Airlines' Special Assistance Coordinator ဆီက စာလိုတယ်။
• Southwest Airlines ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း လေယာဉ်မစီးခင် Medical professional တဦးဦးဆီက အကြံဥာဏ် ရယူပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကို Emergency exit row မှာ ထိုင်ခွင့် ပြုချင်မှ ပြုမယ်။ Due date ရဲ့ ၁၄ ရက်အတွင်း လေယာဉ်စီခြင်း မပြုဘို့ Recommend လုပ်ပါတယ်။
• Delta Airlines အကန့်အသတ် မရှိပါ။ Due date ၁ လအတွင်းရှိသူတွေ Medical professional ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် ရဘို့ Suggest လုပ်ပါတယ်။
၂ဝဝ၆ စက်တင်္ဘာ ၂၄ ရက်၊ ဗြိတိသျှလေယာဉ် BA 215 ဟာ လန်ဒန်ကနေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (ဘော်စတွန်)ကို ပျံသန်းနေတယ်။ ခရီးသည်ထဲက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဦး အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာပေါ် ပျံနေရင်း ကလေး မွေးတော့တယ်။ ခရီးသည်တွေထဲက ဆရာဝန်တဦး၊ သူနာပြု တဦး၊ ပင်စင်စား သားဖွါးဆရာမတဦး၊ ဆေးကျောင်းသားတဦးနဲ့ အမျိုးသမီး လေယာဉ်မယ်တွေကနေ အောင်မြင်စွာ မွေးပေး လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်သည် ဗိုက်နာတာနဲ့ လေယာဉ်မှူးက အနီးဆုံး လေယာဉ်ကွင်း Nova Scotia ကို ဆင်းသက်ဘို့ လုပ်နေတုံး မွေးလိုက်တာပါ။ ကလေးက လမစေ့ (၆ ပတ်စော)မွေး၊ ပေါင်ချိန်လည်း မပြည့်လို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယမ် လေထဲ မွေးရင် မိဘ တဦးဦးက ဘယ်လ်ဂျီယမ် ဖြစ်မှ နိုင်ငံသားရတယ်။ အမေရိကန်မှာ တော့ သူ့ပိုင်နက် US territories ထဲ မွေးတဲ့ကလေးဟာ အမေ-အဖေတွေက ဘယ်နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်နေနေ US citizens နဲ့ နိုင်ငံခြားသားဆိုရင် Dual citizenship ဖြစ်သွားတယ်။
မှတ်တမ်းတွေမှာ အစောဆုံး ပြောနိုင်တဲ့ လေယာဉ်ထဲ မွေးတဲ့ ကလေးကို ၂၉-၃-၁၉၃၁ မှာ Mrs. Alex Miller ကနေ Royal Canadian Air Force ပိုင် လေယာဉ်ထဲ ပေ ၄ဝဝဝ အမြင့်မယ် မွေးခဲ့တယ်။ နာမယ်ပေးတော့ Lindbergh Wright Cook Miller တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၉၂၇ တုံးက တယောက်ထဲနဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာ ဖြတ်သန်း ပျံသန်းသူနဲ့ လေယာဉ် တီထွင်သူတွေကို ဂုဏ်ပြုတာပါ။
၁၆-၁၁-၂ဝ၁ဝ နေ့က ကနေဒါနိုင်ငံသူ ၁၈ နှစ်အရွယ် Louisa Pilurtuut ဆိုသူကနေ တလစော မွေးတဲ့ Baby William ဟာ Free pass for life, aboard Air Inuit တသက်လုံး လေယာဉ် အခမဲ့ စီးခွင့် ရသွားခဲ့တယ်။ ကနေဒါသားလို ကံမကောင်းသူကတော့ ၈-၇-၂ဝ၁ဝ မှာ Turkmenistan ကနေ အိန္ဒိယကို ပြန်လာတဲ့ အိမ်ထောင် မပြုရသေးတဲ့ ၂၅ နှစ်အရွယ် မကုလားမဟာ ကလေးကို လေယာဉ်ထဲ မွေးပြီး၊ Washroom ထဲ စွန့်ပြစ်ထားခဲ့လို့ Amritsar လေဆိပ်မှာ အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။
စီမံချက်ဖြင့် လိုက်လံတိုက်ကျွေးနေသည့် ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးသောက်အပြီး အော့အန်မှုကြောင့် ကလေးငယ်အချို့ ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိ
တာမွေမြို့နယ်အတွင်း ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးရန် ကြေညာထားသည်ကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ကင်းဝေးရေး စီမံချက်အဖြစ် Diethyl Carbarmazine Citrate (DEC) နှင့် Albendezole ဆေးတိုက်ကျွေးမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိနေရာ ဆေးသောက်သုံးမှုအပြီး အော့အန်မှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသရသည့် ကလေးငယ်အချို့ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် စီမံချက်ဖြင့် တိုက်သည့်ဆေးများ သောက်သုံးအပြီး တက်ရောက်ကုသရသည့် ကလေးငယ် နှစ်ဦးခန့် ရှိနေကြောင်း၊ ယင်းကလေးငယ်နှစ်ဦးမှာ ဒေါပုံမြို့နယ်နှင့် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နေ အသက်ခုနစ်နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေးများ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကလေးနှစ်ဦးလုံးမှာ ဆေးသောက်ပြီး မကြာမီ အော့အန်ခြင်းကြောင့် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
"အခု ဆေးရုံတက်နေတဲ့ ကလေးနှစ်ဦးလုံးက ဆေးရုံကို ညနေပိုင်းလောက်က ရောက်လာတာပါ။ ကလေးနှစ်ဦးက ရှော့ခ်ဖြစ်ပြီး ရောက်လာတာတော့ မဟုတ်ဘဲ အန်လို့ရောက်လာတာပါ။ သူတို့မိသားစုတွေကို မေးကြည့်တော့ တခြားထူးထူးခြားခြား စားထားတာလဲ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ တချို့ကလေးတွေက ဆေးသောက်ရင်ကို အန်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ ကလေးတွေလည်းရှိတော့ ဒါကထူးထူးခြားခြား ဖြစ်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အတိအကျ ပြောလို့မရပါဘူး။ အခုနှစ်ဦးလုံး သက်သာသွားတဲ့အတွက် ဒီညနေ ဆေးရုံက ဆင်းကြတော့မှာပါ" ဟု ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးမှ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမေလွင်က စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က ပြောကြားသည်။
ဆေးတိုက်ကျွေးရာတွင် Diethyl Carbarmazine Citrate (DEC) နှင့် Albendezole ဆေးနှစ်မျိုးပေါင်းပြီး တစ်ကြိမ်တည်း တိုက်ကျွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အသက်နှစ်နှစ်အောက် ကလေး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းများ၊ နှလုံး၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ ပန်းနာ စသည့်နာတာရှည် ရောဂါများ၊ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါကြောင့် ဆေးသောက်နေရသူများ၊ အိပ်ရာထဲ လဲနေသည့် လူများမှအပ ကျန်သူများ အားလုံးကို တိုက်ကျွေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အသက်နှစ်နှစ်မှ ငါးနှစ်အရွယ်အထိ တစ်ခြမ်း၊ အသက်ခြောက်နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အထိ ဆေးတစ်ပြား၊ အသက် ၁၄ နှစ်နှင့်အထက် ဆေးတစ်ပြားနှင့် တစ်ခြမ်းစီ တိုက်ကျွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်မတို့ တိုက်ခန်းမှာကျတော့ တိုက်ခန်းမှာစောင့်တဲ့ ဦးလေးကြီးကပဲ ဆင်ခြေထောက်ဆေးဆိုပြီး တိုက်ခန်းမှာရှိတဲ့ အခန်းတိုင်းကို လိုက်ပေးသွားတယ်။ တခြားဘယ်ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းမှ မပါဘူး။ တခြား မြို့နယ်တွေမှာတော့ ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေက တစ်အိမ်တက်ဆင်း လိုက်တိုက်တယ်လို့တော့ ကြားပါတယ်" ဟု ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ၇ ရပ်ကွက်နေ အိမ်ရှင်မတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဆေးတိုက်ကျွေးရာတွင် နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်များတွင် ဆေးတိုက်ကျွေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆေးသောက်ရာတွင် ဆေးကိုအစာစားပြီးမှ သောက်ရန်လိုအပ်ပြီး ဆေးသောက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုများလျှင် အနည်းငယ် မူးဝေတတ်ကြောင်း၊ ဆေးအာနိသင်ကြောင့် ရောဂါပိုးများ သေသွားခြင်းကြောင့် ဖျားခြင်း၊ ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော်လည်း ယင်းလက္ခဏာများမှာ ရောဂါပိုး အမြောက်အမြား ရှိနေသူများ၊ ပထမအကြိမ် သောက်သုံးစဉ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိကြောင်းနှင့် ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ဆေးတိုက်အဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
တာမွေမြို့နယ်အတွင်း ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးနေသည်ကို တွေ့ရစဉ်
ထိုကဲ့သို့ ညွှန်ကြားချက်များ ရှိနေသော်လည်း ယခုဆေးတိုက်ကျွေးရာတွင် သတိထားရမည့် အချက်များနှင့် ဆေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို သေချာစွာ ရှင်းပြခြင်း မရှိသည့်အပြင် အချို့မြို့နယ်များတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများပင် မပါရှိဘဲ ရပ်ကွက်တာဝန် ရှိသူများကသာ လိုက်လံတိုက်ကျွေး နေသောကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအပေါ် စိုးရိမ်နေကြရကြောင်းလည်း သိရသည်။
"ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို လာတိုက်တုန်းကတော့ ဘယ်ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းမှ မပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက လူကြီးတွေက မသောက်မနေရဆိုပြီး အတင်းလာတိုက်တာပဲ။ အိမ်ရှိလူကုန် အကုန်သောက်ရမယ်ပြောတော့ ကျွန်တော့်သမီးဖျားနေလို့ သောက်ပြီးတစ်ခုခုဖြစ်ရင် တာဝန်ယူမလားလို့ မေးတော့မှ အဲဒါဆိုရင် နောက်မှသောက်ပါလို့ ပြောသွားတယ်။ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာလည်း သေချာမပြောသွားဘူး" ဟု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၁၁ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ပြန်လည်တွေ့ရှိနေသည့်အတွက် ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ကင်းဝေးရေး စီမံချက်အဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ဆေးများတိုက်ကျွေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူဦးရေ အနည်းငယ် မြင့်တက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း၏ လမ်းန်ချက်အရ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ကင်းဝေးရေး စီမံချက်ဖြင့် ဆေးတိုက်ရန် လိုအပ်သည်မှာ မှန်သော်လည်း စနစ်တကျမရှိသော ဆေးတိုက်ပုံ နည်းစနစ်ကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိလာပြီး အများပြည်သူ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ဆင်ခြေထောက်ရောဂါပိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရှမ်း၊ ကယားနှင့် ချင်းပြည်နယ်များမှလွဲ၍ ကျန်ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ၌ အမြစ်တွယ်လျက်ရှိပြီး မကွေး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင် ရောဂါတွေ့ရှိမှုနှုန်းမှာ တစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက် လျော့နည်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆင်ခြေထောက်ရောဂါသည် လူမှလူသို့ တိုက်ရိုက်ကူးစက်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ခြင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် သံကောင် (Worm Wuchereria) ကပ်ပါးပိုး တစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆင်ခြေထောက် ရောဂါပိုးကို သယ်ဆောင်ထားသည့် ကျူးလက် (စ်) ဟုခေါ်သည့် ခြင်အမျိုးအစားကြောင့်ဖြစ်ပြီး ယင်းခြင်သည် ရေပုပ်၊ ရေသိုးမြောင်းများ၊ မလုံခြုံသော အိမ်သာကျင်းများတွင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိကြောင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတွင်း နိုင်ငံများအနက် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ကိုးနိုင်ငံ၌ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ အမြစ်တွယ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
3G Manager v 2.1 for android(latest version)
Android ဖုန်း/Tablet ကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက် အင်တာနက်သုံးရင်; အိပ်ပျော်တဲ့ အခါ ပိုက်ဆံမကုန်အောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် 3G Manager v 2.1 for android(latest version) ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..အင်တာနက် သုံးရင်း အိပ်ပျော်သွားတဲ့ အခါမှာ ဖုန်းဘေလ် လည်းကုန် ဘက်ထရီလည်း မခံ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆိုးကျိုးချည်းဖြစ်ပါတယ်..အဲဒီအရာတွေကို ဒီဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ..ဆော့ဝဲလ် ကို install လုပ်ပြီး enable manager ကို On ပေးထားခြင်းဖြင့် ညဘက်အင်တာနက်သုံးရင်း အိပ်ပျော်တဲ့အခါ Screen off သွားခြင်းဖြင့် Mobile Data ကို အလိုလို ဖြတ်တောက် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..ဒါအပြင် မိမိဖုန်းဘက်ထရီ ချွေတာဖို့အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်.. Google play မှာ 0.69 ဒေါ်လာ ပေးဝယ် ယူရမှာဖြစ်ပြီး အောက်ကလင့်ခ် မှာ Freedownload ရယူနိုင်ပါပြီ..
3G Manager v 2.1 ဆော့ဝဲလ် အားရယူရန်
Posted by drmyochit Wednesday, September 11, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ပုံထဲမှာ ကျောကို ဆေးမင်ကြောင်ချယ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးလေးဟာ တရုတ်ပြည်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဘယ်ဘက်က ကစားဝိုင်းကို အာရုံစူးစိုက် နေသူလေးကတော့ ဂျပန်ပါတဲ့။ ည၀တ်အကျီင်္နဲ့ ခေါင်းကို နောက်လှန် ထားသူကတော့ အမေရိကန်မယ်လေးဖြစ်ပြီး ကြမ်းပေါ်မှာ လဲလျောင်း နေတာကတော့ ရုရှားမိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးနားမှာရပ်ကြည့်နေတဲ့ ကလေးမလေး ကတော့ ထိုင်ဝမ်သူလေးပါ။
ဘေဂျင်း ၂၀၀၈ ပန်းချီကားဟာ အနောက်တိုင်းနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အကြိတ် အနယ်ဆွေးနွေးရတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိန်းမ ၄ ယောက် မာဂျောင်ကစားနေတဲ့ပုံဟာ လျို့ဝှက် အဓိပ္ပါယ်မျိုးစုံနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့အပြင် နာမည်ကိုက ဘေဂျင်း ၂၀၀၈ ပါတဲ့။
တရုတ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုက အရှေ့လေ လို့ နှစ်ခွအဓိပ္ပါယ်ရနေပါတယ်။ တစ်ခုက တရုတ်ပြည်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အင်အားပြိုင်ဘက်အဆင့်ကို ဖော်ပြပြီး နောက်တစ်ခု ကတော့ တရုတ်ရဲ့ စစ်အင်အားနဲ့ လက်နက်အင်အားတို့ဟာ စားပွဲပေါ်မှာ အဆင်သင့်ရောက်နေပြီလို့ ပြသထားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ တရုတ်ဟာ နေရာကောင်း ရထားသလိုလိုရှိနေပေမဲ့လည်း မိန်းကလေးရဲ့ တစ်ခြားလက် တစ်ဖက်ကို မြင်ခွင့်မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မိန်းကလေးဟာ နောက်လက် တစ်ဖက်ကလည်း စားပွဲအောက်မှာ ၀ှက်ကစားနေပါသေးတယ်။
အမေရိကန်သူလေးကတော့ သိပ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပါ။ ထိုင်ဝမ်သူလေးကို လှမ်းကြည့်အကဲခတ်နေပြီး မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲ ပြနေပုံပေါ်ပါတယ်။ ရုရှားမယ်ကတော့ ကစားပွဲကို စိတ်မ၀င်စားချင်ယောင် ဆောင်နေပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ ခြေတစ်ဖက်က အမေရိကန်ကို ချိတ်လို့ လက်တစ်ဖက်ကတော့ တရုတ်ကို ကမ်းလျှက်ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံနှစ်ခုလုံးနဲ့ တိတ်တဆိတ် အကျိုးစီးပွားဖလှယ်လေ့ရှိတဲ့သဘောပါ။
အပြင်ဘက်မှာတော့ မြစ်ရေပြင်ဟာ လေထန်နေပြီး မုန်တိုင်းကျတော့မဲ့ အခြေအနေမျိုးမို့ ဒါဟာ တိုင်းပြည်နှစ်ခုကြားက တင်းမာပေါက်ကွဲလုလု အနေအထားကို ပြဆိုပါတယ်။ နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားကလဲ သိပ်ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိတာပါ။ မာအိုရဲ့ မျက်နှာ၊ ချန်ကေရှိတ်ရဲ့ နဖူးပြောင်နဲ့ ဆွန်ယက်ဆင်ရဲ့ မုတ်ဆိတ်တို့ကို ပေါင်းစပ်ရေးဆွဲထားပါတယ်။
မိန်းကလေး ၄ ယောက်ရဲ့ အ၀တ်အစားအနေအထားဟာ တိုင်းပြည်တစ်ခုစီရဲ့ စီးပွားရေးကို ပြဆိုပါတယ်။ တရုတ်ဟာ အပေါ်ပိုင်းဗလာပေမယ့် အောက်ပိုင်း မှာတော့ စကတ်နဲ့ အတွင်းခံကို ၀တ်ဆင်ထားပါတယ်။ အမေရိကန်ကတော့ ဘရာစီယာနဲ့ အပေါ်ရုံအကျီင်္ကို ၀တ်ထားပေမဲ့လည်း အောက်ပိုင်း ဗလာ ဖြစ်နေပြန် ပါတယ်။ ရုရှားကတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးသာကျန်ပြီး ဂျပန်ကတော့ လုံးတီးနဲ့ပါ။
ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင် အမေရိကန်က အခြေအနေအကောင်းဆုံးလို့ ထင်ရပြီး တောက်ပြောင်နေပေမယ့် အထိအရှမခံနိုင်ဆုံး အပိုင်းဟာ ရှင်းရှင်းကြီး ပေါ်နေပါပြီ။ တရုတ်နဲ့ ရုရှားဟာ အ၀တ်မပါဘူးဆိုပေမဲ့လည်း လုံရမယ့်အပိုင်းတွေကို လုံအောင်ဖုံးထားနိုင်စွမ်းရှိနေပါသေးတယ်။
တကယ်လို့များ ဒီကစားပွဲအပြီးမှာ ကျန်သမျှကိုသာ ချွတ်ကြရကြေးဆိုရင် တရုတ်ရှူံးခဲ့ရင် ရုရှားနဲ့တူပါတော့မယ်။ ( ဒါဟာ ရုရှားပြိုကွဲခြင်းကို ညွှန်းပါတယ်။ ) အမေရိကန် ရှူံးခဲ့ရင်လဲ ရုရှားနဲ့ပဲ တူပြန်မှာပါပဲ။ တကယ်လို့ ရုရှားရှူံးရင်တော့ အားလုံးရှူံးပြီး ဂျပန်ကတော့ နဂိုကထဲက ဘာမှ မကျန်တော့တာပါ။
ရုရှားဟာ အိမ်ဖြည့်ရုံဝင်ကစားနေတယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ တရုတ်နဲ့ ပေါင်းပြီး လိမ်ကစားနေပါတယ်။ တကယ်အိမ်ဖြည့်နေရသူကတော့ ဂျပန်ပါ။ ဒီတစ်ခါရှူံးရင်တော့ ဂျပန်ဟာ ကစားဝိုင်းကထွက်ရပါတော့မယ်။
အမေရိကန်ဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် အန္တရာယ်တွေဝိုင်းလို့ပါ။ ဒီတစ်ချီရှူံးရင် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးအနေအထားကို စွန့်လွှတ်ရပါမယ်။ ရုရှားကတော့ နှစ်ဖက်ကစားနေပြီး တရုတ်လွတ်လပ်ခါစ အနေအထားမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက တရုတ်ဟာ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် ရုရှားကိုမှီခိုပြီးနောက် အမေရိကန်ကို မှီခိုခဲ့ရပါတယ်။
တရုတ်ရဲ့ မာဂျောင်အတုံးကလေးတော်တော်များများကို မြင်ခွင့်မရတာဟာ တရုတ်မှာ လျို့ဝှက်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်အတော်များများရှိလိမ့်မယ်လို့ ပြဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်ဟာ ရုရှားနဲ့ တိတ်တိတ်ဖလှယ်နေပြီး အမေရိကန် ကတော့ ထိုင်ဝမ်သူလေးရဲ့ ပုံစံကနေသာ မှန်းဆနေရပါတယ်။ ဂျပန်ကတော့ သူ့ကိုယ်သူကလွဲလို့ ဘယ်အရာမှ စိတ်မ၀င်စားပါ။
နောက်ဆုံးဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ကြားမှာပဲ ရှိနေတာထင်ရှားလှပါတယ်။ အနီးကပ်ထပ်ကြည့်ရင်တော့ အမေရိကန်က ကစားအားရှိနေသေးပေမဲ့ ကစားနေတာက တရုတ်မာဂျောင်ပါ။ အနောက်တိုင်းပိုကာ ကစားနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်ရဲ့ ကစားပွဲ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ကစားနေပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ဘယ်လောက်များရှိနိုင်ပါ့မလဲ။
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ (၉)
တာမွေပလာဇာအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော ညကလပ်၊ ကေတီဗွီ၊ ဟိုတယ်များအကြောင်း ပြောရမည်ဆိုလျှင် နေ၀င်သွားသည်နှင့် မိကောင်းဖခင် သားသမီးများ ဖြတ်မလျှောက် ရဲလောက်အောင်ပင် ဖြစ်နေကြောင်း၊ တာမွေ ပလာဇာရှေ့၌ရှိသော ကားမှတ်တိုင်တွင် မိန်းကလေးများကို ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးပြောဆိုမှုများ ရှိကြောင်း ညကလပ်သို့ လာရောက်သည့် လူငယ်များသည် ရန်ပွဲများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားကာ ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားပါက ရပ်ကွက်ထဲသို့ ပြေးဝင်လာသောကြောင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ အိပ်စက်အနားယူချိန် အထိတ် တလန့်ဖြစ်ရကြောင်း၊ အဆိုပါ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုများကို အရေးယူခြင်းမရှိသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့တော်စည်ပင်အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ နေရာ၌ ညကလပ်၊ ကေတီဗွီနှင့် ဟိုတယ်ဖွင့်ရန် ငှားသင့်သည်၊ မငှားသင့်သည် စဉ်းစားသင့်ကြောင်း၊ ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက်သားများ၏ မျက်နှာ ထောက်ထားသင့်ကြောင်း ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူတစ်ဦးက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
ဟွားဝေဖုန်းဆိုင် အဖောက်ခံရလို့ ကျပ်သိန်း ၁၈၀ ကျော်...
ကားဆင်းတွန်းခိုင်းပြီး သိန်း ၁၂၀ ငွေထုပ်တင် မောင်း...
ထူးထူးခြားခြား စံချိန်သစ်တစ်ခု တင်နိုင်ခဲ့သည့် မို...
Screen Lock ကို မိမိအသံနဲ့ ဖွင့်နိုင်မယ့် Voice Lo...
ရေးဆွဲသူ အမည်မသိ ပန်းချီကားကို ဗန်ဂိုး၏ လက်ရာအဖြစ်...
ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားပြီး ပြုလုပ်ခွင့်ြ...
စီမံချက်ဖြင့် လိုက်လံတိုက်ကျွေးနေသည့် ဆင်ခြေထောက်ေ...
စည်ပင်မှ ငှားရမ်းထားသော ညကလပ်၊ ကေတီဗွီနှင့် ဟိုတယ်...
ဓာတုလက်နက်များ လွှဲပြောင်းပေးရေး ရုရှားအစီအစဉ်ကို ဆ...
ပညာတတ်ပြီး သိက္ခာရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဖြစ်ချင...
မလေးရှားမှ မြန်မာအားလုံး တရားဝင်အလုပ်သမား ဖြစ်စေရေ...
အမျိုးသား ၄ဦး အုပ်စုလိုက် အဓ္ဓမပြုကျင့်မှုနဲ့ အပြစ်ထ...
ခင်ပွန်းနဲ့အဆင်မပြေလို့ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ပြီး သေကြော...
၁၇ နှစ်သမီးကို အသက် ၃၀ ကျော် အိမ်နီးချင်းက ခိုးပြေ...